January 6, 2010 by chowutyee
Posted in တရုတ်ဟင်း ချက်ပြုတ်နည်း, အဓိက ဟင်းလျာများ | 68 Comments
wow eat chin tal……ku 😦 miss the food….
ရှလွှတ် .. ကြိုပြီးတောင် သွားရည်ယိုလာဘီ။
ရေးထားတာ ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ မှတ်မိလွယ်တယ်။
ကိုဇေယျာခုလို ချက်လို့ ကျေးဇူးပဲနော်….. 🙂
တင်လိုက်ပါနော် မခိုင်၊ ၀တ်ရည်လည်း မြည်းချင်လို့ပါ.. ခုလို ချက်စားလို့ မခိုင်ကို အရမ်းလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် 😉
I m also really nice to meet Shwe Zin.. Thanks you so so much… 😉
့hee No problem Thant… 😉
လုပ်စားကြည့်ပါနော် ကိုသားကြီး.. ၀တ်ရည်က ခုဇွန်မှာ ၂၅နှစ်ပြည့်မှာပါ။ 🙂
လုပ်စားကြည့်ပါနော် မယမင်း.. 😉
နှင်းအိရေ… ၀က်ကလီစာကို သန့်စင်အောင် လုပ်ပြီးမှ ချက်ရတာပါ။ ၀က်ကလီစာမှာပါတဲ့ နားရွက်ဆိုရင် အမွှေးစင်အောင် ခြစ်ပေးရပါမယ်.. အူတို့၊ အူမတွေကိုလည်း ချီးတွေကို ရေနဲ့ အားလုံး သန့်အောင်ထိ ဆေးပေးရပါမယ်။ သန့်စင်သွားပြီဆိုမှ ဟင်းစချက်ရမှာပါ.. 😉
– ထပ်ချက်ကြည့်ပါအုန်းနော်။ အဆင်မပြေတာ ရှိရင်လည်း ပြောပါ.. 🙂
Nai ကိုလည်း ကျေးဇူးပါ…. 🙂
san san ရေ နတ်မက်ကို မြန်မာဆိုင်ထက် အိန္ဒိယ ကုန်စုံဆိုင်မှာ ပိုရနို်င်လောက်တယ်…. 🙂
ချက်နည်းလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ နှင်းရေ.. 🙂
၀င်းကေသီရေ ၀က်သားဒုတ်ထိုးကို မြန်မြန်နဲ့ ချက်လို့ရအောင် ၀တ်ရည် စဉ်းစားမိသလောက် ပြောမယ်နော်။ အပေါ်အအးခန်း အပေါ်ထပ်မှာ မထည့်ထားပဲ၊ ဧည်သည့် ၂ယောက်စာလောက် ၀က်သားအစုံကို နုယ်ရမယ့် ပစ္စည်းတွေနဲ့ နုယ်ထားပြီ အာက်အအေးခန်းမှာ ထည့်ထားလိုက်ပါ။ ချက်မယ်ဆိုလဲ နုပ်ပြီသား အဆင့်သင့်မို့ ချက်ချင်း ချက်လို့ လွယ်ပါတယ်။ အသားတွေကို မြန်မြန်နူစေချင်ရင် Pressure Cooker အိုးကို အသုံးပြုလျှင် ပိုအကျက်မြန်ပါလိမ့်မယ်။ ၀တ်ရည် ပြောပြတာလေး အထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပါနော်… 😀
၀တ်ရည်ကလည်း ကျေးဇူးးပါ.. 😀
၀တ်ရည်ရေ ၀က်သားတုတ်ထိုးခုလုပ်နေတယ် ပါဝင်ပစ္စည်းတော့မစုံဘူး 🙂 အရမ်း ကျေးဇူးတင်တယ် ချစ်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့ ဟင်းများကိုချက်တတ်လို့လေမချက်တတ်တဲ့တို့လိုလူတွေ.. ၀တ်ရည်ရဲ့ပိုစ်လေးတွေဖတ်လိုက်တာနဲံ့ ချက်ချင်စိတ်ပေါက်လာတယ် ပီးတော့ လွယ်ကူအောင်လဲေ၇းထားပေးလို့.. ကျေးဇူးပါနော်
မစန်းကိုလည်း ကျေးဇူးပါနော်.. 🙂
Thanks also! Try it!!! 😛